Home Wararka Ciyaaraha Maanta Lautaro Martinez oo ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo Inter Milan?
Weeraryahanka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez ayaa xaqiijiyay inuu doonayo inuu sii joogo San Siro inkasta oo uu xiriir joogto ah la leeyahay Barcelona .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa loo arkaa bartilmaameedka koowaad ee Blaugrana xagaagii lasoo dhaafay ka dib markii uu ka tagay Luis Suarez , laakiin u dhaqaaqitaankii Catalonia ayaa ku guuldareystay inuu dhaqan galo, waxaana uu weli uu sii wadaa wada-hadalka kooxda Inter.
Hadal heynta mustaqbalka Martinez ayaa qabowday iyadoo Barca la filayo inay u weecatay dhanka Lyon Memphis Depay , ninka Inter ayaana rajeynaya inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxda Antonio Conte dhawaan.
Martinez oo la hadlayey Sportweek ayaa yidhi: “Waan ku faraxsanahay Inter, Milan waa magaalo weyn. Wakiilkeyga iyo kooxdu way wada hadlayaan aniguna waan daganahay. Kaliya waxaan doonayaa inaan wax walba u dhiibo Inter, ka dib waan heshiin doonnaa.”
23 jirkaan ayaa durbaba dhaliyay 10 gool isla markaana caawiye ka ahaa shan kale tartamada oo dhan intii lagu jiray ololihii 2020-21, qandaraaska uu haatan kula joogo kooxda Inter ayaana dhacaya xagaaga 2023.
Previous articleJuventus oo xiiseyneysa saxiixa Xidiga Manchester United ee Juan Mata iyo Tartan wajihi kara
Next articleManchester City oo ka fiirsaneysa inay lacag badan ku dalbato Romelu Lukaku